Herintaona Aty Aoriana: Nahoana No Mbola Anaty Fantsona Foana Ny Hazalambo Ao Tiorkia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Aogositra 2017 6:52 GMT
Vakio amin'ny teny Português, русский, Español, English
Hetsik'ireo mpanao fihstiketsehana nandritra ireo alina nanaovana hetsi-panoherana tao an-kianja Gezi. Zava-niseho ny 15 Jona 2013. Sary avy tamin'i Mstyslav Chernov.
Rehefa i Tiorkia no resaka, miseho amin'ny toetra fandavana sy tohina ireo solontenan'ireo firenenan'ny Vondrona Eorôpeana—nampiana sy nankaherezin'ireo Tiorka liberaly izay nahazo ny fitondrana ankehitriny, ny antoko Fahamarinana sy Fampandrosoana (AKP), izay diso voalohany. Ny fahorian'izy ireo dia niorim-paka tao anatin'ny hevitra izay nilaza teo aloha fa, ny taona 2013, nitondra ny firenena any amin'ny làlan'ny fanantenana sy demokrasia ny governemanta tantanan'i Recep Tayyip Erdogan. Mazava ho azy, tsy izany mihitsy no nitranga.
Tato anatin'ny efatra taona farany, ny azo antoka, tratra tao anatin'ny bodibory vetaveta'ny fanaovana didy jadona i Tiorkia. Nandritra io fotoana io, lasa famaritana ny firenena eo imason'ny media iraisam-pirenena ireo famoretana ataon'ny governemanta izay atosiky ny ady anatiny ao amin'ny fanjakana Tiorka, toy ny fanitàrana ny fanoherana ny fitondran'ny AKP.
Ankehitriny, satria nanamarika ny faha-herintaonan'ny nanaovan'ireo manamboninahitra miaramila fanonganam-panjakana mihosin-drà sy tsy tafita, ny firenena, milaza ny vohikala iray miresaka ilay hazalambo ataon'ny governemanta naterak'izany, fa maherin'ny 100.000 ireo mpampianatra, mpiasa-panjakana, miaramila manamboninahitra ary mpitsara no voaroaka tamin'ireo toerany, heverina ho nifandray tamin'ilay tetika.
Eo amin'izany zava-mitranga izany, tsy azo ihodivirana angamba ny fahatsiarovana ny vanim-potoana mialoha ny taona 2013.
Tamin'ireo fivoriana natrehako, nientanentana nisaona io fotoana io ireo solontenan'ireo Eorôpeana mpiantsehatra tsy avy amin'ny fanjakana, indrindra indrindra. Araka ny fijerin'izy ireo, tsy nofonjaina talohan'ny taona 2013 noho ny fanoratana boky mikasika ilay mpiara-dia tamin'i Erdogan, Fethullah Gulen, mihitsy ilay mpanao gazety fanadihadiana, Ahmet Şık ; ary tsy nofoanana izany mihitsy ny hetsika ara-politika Kiorda no sady tsy nahatsapa ho niharan'ireo tetidratsin'ny governemanta ireo laika sy sosialista.
Tena tsotra sady tsy mitombina ny tsoakevitr'izy ireo: tsara sy lehibe daholo ny zavatra rehetra nialoha ny taona 2013, kanefa nisy zavatra tsy nety ihany.
‘Manao izay sitraky ny fony ireo matanjaka’
Ireo hafa nahita mialoha fa marobe ireo lahatsoratra taoria'ny 2013 no mirona amin'ny vanim-potoana 2006. Nandritra io fotoana io, nihamafy ny fametrahana ny tsy rariny hita tany anatin'ny andrim-panjakana nanomboka hatrany amin'ny fotoanan'ny AKP ny taona 2002, raha toa nanjavona tsikelikely ny fanarahamaso tao amin'ny governemanta fony nolalorin'ny AKP simenitra ny fanarahamaso an'ireo endrika maromaro kokoa amin'ny fiainam-bahoaka.
Mitazona ny nentin-drazana ara-tsosialy ny lahatenin'ny AKP, fa mandritra izany koa, manohitra ny fametrahana ‘establishment’ sy ny fanaovana kobaka am-bava; nanome toky izy ireo ny haka indray ny herin'ny tafika, ary nilaza fa ny politika liam-pivoarana ho fàkan'ny ankamaroan'ireo olan'ny firenena.
Fa tamin'izany andro izany ihany, nanao izay nampalemy ireo andrim-panjakana ireo tany Tiorkia ilay antoko—indrindra ny media sy ny fiarahamonim-pirenena—izay nanome hery ny tena hevitry ny demokrasia Tiorka.
Raha nitranga izany, nitsangam-potsiny ny Vondrona Eoropeana izay efa ela no nampilendalenda an'i Tiorkia ny fidirana ho mpikambana ao amin'ny klioba. Ireo andrim-panjakana ara-bola iraisam-pirenena efa namàka lalina ao amin'ny firenena dia nitehaka ny governemanta ho toy ny mpanamora ny firoboroboana matanjaky ny toekarena.
Nohamafisin'ny vondron'ireo manampahaizana matotra ny fanantenana ho an'ny firenena, izay any am-ponja ny sasany amin'izy ireo ankehitriny. Tsy nahavita naminavina mialoha ny fisian'ny tsy fifandanjana aterak'ilay fizotry ny fametrahana ny demokrasia izy ireo, izay raha ny marina dia tsy inona akory fa ny fanjakan'ny maro an'isan'ny AKP fotsiny.
Ny famàran'i Gezi
Ny taona 2013, nibaribary ny nahitàn'ireo mpanaramaso avy ao anatiny sy avy any ivelan'i Torkia ireo lesoka amin'ny demokrasia Tiorka napetraky ny AKP. Tamin'ny volana Mey tamin'io taona io, nangotraka ny hatezerana manodidina ilay noheverina ho fisian'ny kolikoly ao amin'ny governemanta AKP, sy ny fitombon'ny tsy fandeferan'i Erdogan amin'ireo mpanohitra ny fandaharanasany ara-politika niaraka tamin'ireo hetsika tao amin'ny Kianja Gezi, ao Istanbul, nokarakarain'ireo tanora. Farafahakeliny olona 22 no maty satria nampiasa hery ny polisy nisambotra olona teo amin'ny 5.000 isa teo.
Fa na teo aloha aza, nisy ireo famantarana hoe mety hampisy fifandonana ny fifikirana mitombo ataon'ny AKP eo amin'ny fiarahamonina. Nanolotra hevitra ny faniriana hametraka ireo fianakaviana ao amih'ny firenena ao anatin'ny endriny nentim-paharazana ilay eritreritra biopolitika hita mibaribary fa mibahana toerana ao amin'ny governemanta. Ilay fitsapankevi-bahoaka ny taona 2010 ary nandresen'ny antoko indray no nanefy indray ny rantsana mpanao lalàna mba hanome hery misimisy kokoa ny antoko maro an'isa eo amin'ny fitondrana, ary hampihena ny fanarahamaso avy amin'ny parlemanta.
Rafi-pitsaràna vetivety dia rava, mpanohitra malemy sy nizarazara ary ny famotipotehana ny fanaovana gazety tsy miankina; ireo daholo ireo lova navelan'ny fitondran'ny AKP izay niantomboka 15 taona lasa izay, fa tsy tamin'ny taona 2013.
Ny 16 Aprily, tonga tamin'ny faran-tampony i Erdogan sy ny AKP tamin'ny fitsapan-kevibahoaka kely izay nitakiana tamin'ireo Tiorka mpifidy hifidy ho an'ny fanitarana ireo fahefan'ny ao amin'ny prezidansa. Natao tao anaty hamehana io, izay nampiharina hatramin'ilay fanonganam-panjakana tsy tafita—iray taona teo ho eo izay.
Milaza ireo fandikàn-dalàna maro fa andrim-panjakana demokratika iray hafa eo an-dalam-pirodanana ireo fifidianana Tiorka. Ankehitriny, afaka mandroaka ny parliemanta ny filoha ary manendry ireo minisitra sy ireo tomponandraiki-panjakana ambony hafa na tsy manaraka ny dingana napetraka aza.
Afaka manendry ny ampahatelon'ireo mpitsara lehibe izy, miantso fitsampankevi-bahoaka, manambara fepetra amin'ny tany latsaka an-katerena toy ny niainan'i Tiorkia hatramin'ny nisian'ilay fanonganam-panjakana, ary mamoaka didim-panjakana izay mihatra toy ny lalàna. Manamarika ny fiafaran'ny parlemanta Tiorka ireo fanovàna.
Tena loza tokoa ny nitranga tany Tiorkia, vao maika lasa loza be noho ny filazan'ireo feo mavesatra indrindra rehefa miteny, zavatra ratsy tamin'ny fotoana ratsy. Ny Tiorka mpanohitra no tsiniana amin'ny ampahany amin'izany, izay tsy nahavita niara-nizotra tamin'ireo fotoana tena nilàna azy, fony nampiseho rho-mitatao mazava tamin'ny fisiany ny fandaharanasan'ny AKP. Ny sangany iraisam-pirenena no hafa meloka tamin'izany, izay tsy niraharaha ireo tsy rariny naka fàka tao Tiorkia, araka izay tratrany, izay nolazaina ho tantaranà fahombiazana foana kanefa feno ireo akora rehetra ho an'ny tsy fahombiazana.